Preview ၌ PDF ကို JPG သို့ Mac ပေါ်ပြောင်းပါ ငါက Mac ကပါ
PDF ကို JPG သို့ Preview ထဲတွင် Mac ပေါ်သို့ပြောင်းပါ
သုံးစွဲသူအများစု (အားလုံးအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟုပြောရန်)၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ကွန်ပျူတာကိုတို့ထိသောအခါ၎င်းသည်မည်သည့် Windows operating system ကိုမဆိုအသုံးပြုသည်။ မိုက်ခရိုဆော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်များတွင်အရာရာတိုင်းအတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များရှိသည်၊ တူညီသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးချသည့်ကွဲပြားခြားနားသောများပင်ဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရဤအပလီကေးရှင်းများစွာသည်စနစ်၏ချို့တဲ့မှုအချို့အတွက်အစားထိုးရန်တည်ရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာကွန်ပျူတာကိုသုံးပြီးအရာဝတ္ထုတွေကိုတပ်ဆင်စရာမလိုဘဲလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ် Mac အကြောင်းပြောနေသည်။ အကယ်၍ သင်မသိလျှင် OS X တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် PDF ကို JPEG သို့ပြောင်းပါ အပိုဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲနှင့်အပြန်အလှန်။
PDF ဖိုင်တစ်ခုကို JPEG သို့ပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Preview ကိုသုံးမည်သင်စဉ်းစားထားတာထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ application တစ်ခုပါ။ ငါပြောနေတာပါ။ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံကိုဖွင့်ရန်အတွက်သာအသုံးပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဆွစ်ဇာလန်စစ်တပ်၏ဓါးသည်ပုံများကိုပြင်ဆင်ရန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပုံများအတွက်မူ၊ ကျွန်ုပ်သည် Preview ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိစာလုံးများနှင့်ငွေရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စာသားတစ်လုံးကိုရေးလိုပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်သည် Pixelmator ကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ပုံပျက်ရန်လိုသည်။ ငါပြီးသား Photoshop ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာက PDF ကို JPG အဖြစ်ပြောင်းရန်။ ပြီးတော့ဒီရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အခြားအရာများကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုရှင်းပြပါမယ်။
1 Mac ပေါ် JPEG သို့ PDF ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲ
2 JPEG ရုပ်ပုံများကိုပိုမိုသေးငယ်အောင်ပြုလုပ်နည်း
3 ပုံတစ်ပုံကို PDF သို့ပြောင်းနည်း
Mac ပေါ် JPEG သို့ PDF ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲ
ငါတို့လုပ်တယ် PDF ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်၎င်းကိုမပြုပြင်ပါကပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် Preview တွင်ဖွင့်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ပြီးပါက၊ အလယ်တန်းကိုနှိပ်ပြီး Preview ဖြင့်ဖွင့်ပါမည်။
ရဲ့ menu ကိုသွားကြကုန်အံ့«ဖိုင်တင် / တင်ပို့ပါ"။
ပုံမှာတွေ့ရတဲ့မီနူးကိုငါတို့ပြတယ် ကျနော်တို့ JPEG ကိုရွေးပါ.
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအမည်တစ်ခု (optional) ပေးရန်လိုအပ်ပြီးပုံကိုသိမ်းလိုသည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးအပေါ်ကိုနှိပ်ပါ ကယ်ဆယ်.
လွယ်ပါတယ်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သော parameters များကိုလည်းပြုပြင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံရိပ်သည်နေရာမယူလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်အခန်းတွင်ရှင်းပြထားသည်။
အကယ်၍ အရည်အသွေးသည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံများကိုမျှဝေလိုပါကသို့မဟုတ်နေရာလွတ်မယူလိုပါကထပ်ဆင့်ခြေလှမ်းလှမ်းရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ပုံကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမပြုမီ resolution နှင့်အရည်အသွေးနှစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဤတွင်တန်ဖိုးများကိုလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သော်လည်း resolution ၁၀၀ နှင့်အလယ်အလတ်အရည်အသွေးဖြင့်မည်သည့်ရုပ်ပုံအတွက်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ပုံကိုမည်မျှလျှော့ချသည်ကိုကြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းရွေးရန်သာလိုပြီးသတင်းအချက်အလက်ရယူရန် (Right Get) ကိုနှိပ်ပါ။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့သောဓာတ်ပုံများဖြစ်လျှင်ငွေကုန်ကျသင့်သည်သေချာသည်။
ပုံတစ်ပုံကို PDF သို့ပြောင်းနည်း
ပုံတစ်ပုံအား PDF သို့ပြောင်းပါ ပိုပြီးရိုးရှင်းပါတယ် Preview တွင် File menu တွင်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သော option ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံကိုသာဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။PDF အဖြစ်တင်ပို့သည်။»ထိုအခါဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းပါ။ ဒါပေမယ့်ပုံများစွာမှ PDF တစ်ခုကိုလုပ်ချင်ရင်ကော။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်သော်လည်းမခက်ခဲပါ။ ရုပ်ပုံတွေကိုအမည်ပေးတဲ့အခါသူတို့လိုချင်တဲ့အစဉ်အတိုင်းပေါ်လာအောင်ဂရုစိုက်ရမယ် (တို့လိုချင်ရင်လည်းသူတို့ကိုလက်နဲ့ရွှေ့နိုင်တယ်) ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်။
ငါတို့မရှိရင် ကျနော်တို့ပုံရိပ်တွေကိုအမည်ပြောင်း စာမျက်နှာအမိန့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အဆုံးမှာနံပါတ်ထည့်သွင်းခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် PDF ၃ ​​ခုပါ ၀ င်သော PDF အတွက် test1, test2 နှင့် test3ကိုသုံးမည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ "စမ်းသပ်မှု" ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိန်းဂဏန်းတွေတောင်မှတစ်ခြားအရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလို့ရတယ်။
ငါတို့လုပ်တယ် အလယ်တန်းကလစ် / ဖွင့်ပါ, တစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံးပုံရိပ်တွေဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ယခုတွင်ငါသည် menu ကိုသွားပါ ဖိုင် / ပုံနှိပ်ပါ.
လက်ဝဲဘက်အောက်ခြေရှိ menu ကိုပြသပြီး "Save as PDF ... " ကိုရွေးပါ။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း Apple Preview သည်ပြoneနာတစ်ခုထက်ပိုပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုရနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အချို့သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော application များသို့သွားရန်အသုံးပြုပါက Apple tool ကိုအခြားအရာတစ်ခုထက်သာလွန်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ OS X 10.11 El Capitan ဖြန့်ချိပြီးကတည်းကပိုပြီးအံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » PDF ကို JPG သို့ Preview ထဲတွင် Mac ပေါ်သို့ပြောင်းပါ
လော်ရာ Noguera ဟုသူကပြောသည်
ဟဲလို, အစွန်အဖျားကအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမှာပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ်။ ပထမစာမျက်နှာကို .pdf ကိုပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ကျန်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလဲဖို့နည်းလမ်းမရှိတော့ဘူး။ အကြံဥာဏ်တစ်ခုခုလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!
Laura Noguera အားစာပြန်ပါ
အခြားစာမျက်နှာများကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်း၏ pdf သို့ကူးယူပြီးဖိုင်ကိုတင်ပို့ပါ
အာဗေလ Cruz ဟုသူကပြောသည်
ပြနာ။ အကယ်၍ PDF တွင်စာမျက်နှာတစ်ခုထက်ပိုပါကသင်သည် JPG စာမျက်နှာကိုတစ်စာမျက်နှာချင်းပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ အရာအားလုံးကိုရွေးချယ်ပြီးသင်ဒီမှာပြောသည့်အတိုင်းတင်ပို့သည် (သာမန်သာဖြစ်သည်) ၎င်းသည်စာမျက်နှာတစ်ခုထက်မကအလုပ်မလုပ်ပါ။
Abel Cruz အားပြန်ပြောပါ
Apple က OS X El Capitan 10.11.3 ၏ဒုတိယ beta ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Macbook အတွက် USB-C ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးမော်နီတာများ